त्यो रात – जसले मेरो कोख भरिदियो र उसलाई मैले भगवान माने… सबैले एकपटक पढ्नै पर्ने – live 60media
१। के तपाईं सन्तानहिन हुनुहुन्छ रु उत्तरको ठाँउमा हो होइन लेखिएको थियो । उनले हो मा चिनो लगाइन् ।२। के तपाईं पैंतिस वर्ष नाघ्नु भएको छैन र उत्तरको ठाँउमा छ छैन लेखिएको थियो । उनले छैन मा चिनो लगाइन् ।३।के तपाई विज्ञानसम्मत रुपले आमा बन्नका लागि योग्य हुनुहुन्छ ? अर्थात् तपाईंको मेडिकल जाँच भइसकेको छ ? उत्तरका ठाँउमा छ छैन लेखिएको थियो । उनले छ मा चिनो लगाइन् । कृपया अर्को पानामा जानुहोस् लेखिएको ठाँउमा उत्तराले क्लिक गरिन् । तपाईं नछुने भएको कति दिन भयो र त्यहाँ कर्शरले तानेर अंक राख्नु पर्ने थियो । उत्तराले सातको अंक राखी दिइन् । त्यसपानामा त्यही एउटामात्र प्रश्न लेखिएको थियो र अर्को पानामा जाने चिन्ह थियो।
← करिश्माले शेयर गरिन् राजेश सँगकाे फाेटाे फ्यानले गरे यस्ताे कमेन्ट …..
बग्दाबग्दैको पानी जम्‍न थालेपछि ! →